﻿ ‘औद्योगिक मजदुरहरुलाई तालिम दिएर श्रम क्षेत्रमा पठाउने योजना छ’
बिहीबार २९, असोज २०७७
इटहरी वडा नं.१२ इटहरीकै औद्योगिक क्षेत्र हो । जनप्रतिनिधि आएपछि यो वडाको विकासले गति लिएको छ । वडामा विकासको अवस्था, योजना जस्ता विभिन्न विषयमा हामीले वडा सदस्य रुपेश बस्नेतसँग केही कुराकानी गरेका छौं । आउनुहोस् हेरौँ न्युजलयका लागि रोजिना खतिवडाले गरेको कुराकानीः
अहिले यो विश्वव्यापी रुपमा जुन महामारीको सामना मानव जातीले गरिरहनु परेको छ, त्यसको व्यवस्थापनमा मैले पाएको जिम्मेवारी अनुसार त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट बच्नको लागि केके उपाय अपनाउने र संक्रमितलाई औषधि उपचारमा कसरी पठाउने जस्ता कुराहरुमा व्यस्त छु । क्वारेन्टिन, होम आइसोलेसनका कुराहरु संगसंगै राहत पुर्नस्थापनाका कामहरूमा मेरो समय खर्च भइरहेको छ ।
वडाको विकासको पाटोमा अहिले कोभिड १९ ले विकास निर्माणका कार्यमा पुर्णरुपमा असर पुर्याइरहेको छ । आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने नगरसभा पनि अन्त्य भएको छैन । नगरसभा अन्त्य भैसकेपछि विकासको काम अघि बढ्ला । तर मोटामोटि त्यसको रुपरेखाहरु सबै तयार भैसकेको छ । विकास भन्दा पनि अहिले यो संक्रणबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भन्ने विषयमा नै ध्यान गएको छ । वडामा उपभोक्ता समितिसमेत बनाउदैछौं ।
वडा सदस्य र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो छ ?
वडा सदस्य र कर्मचारीको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छ । सौहार्दपूण सम्बन्ध हुनैपर्छ । भएन भने जनताको काम चुस्तदुरुस्त ढंगबाट हुँदैन । जनप्रतिनिधि र वडाका कर्मचारीबीचको सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो र जवाफदेही पूर्ण छ ।
वडाको बैठकहरुमा तपाईहरुको उपस्थिति हुन्छ कि हुँदैन ?
प्रत्येक बैठकमा हाम्रो उपस्थिति हुन्छ । हामी महिनमा लगभग नियमित ३ वटा बैठक बस्छौं । अरु त्यस्तै किसिमका विषयहरु आउँदा चाँही कहिलेकाँही ४र५ वटा बैठक पनि बस्ने गरेका छौँ । अब यो कोभिडको कारणले बैठकको संख्या अहिले अलिक बेसी छ ।
कतिपय वडामा अध्यक्षले मनोमानी गर्ने गरेको गुनासो वडा सदस्यहरूबाट कुरा सुन्न पाइन्छ । यहाँ कस्तो छ ?
वडाअध्यक्षले मनोमानी गरेको हाम्रो वडाको हकमा त्यो कुरा देखिदैन । त्यस्तो गर्ने अवस्था सिर्जना पनि हुँदैन । किनभने अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छौं हामी । कुनै निरंकुश शासन व्यवस्थामा छैनौं । अहिलेसम्म वडाअध्यक्षको मनोमानी छैन । हामी सबै सरसल्लाह सहकार्यबाटै अगाडि बढिरहेका छौँ ।
अझै के भइदिए वडाको विकास हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
धेरै कुराहरु छन् । यसमा विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको कुरा, सिंहदरबारको शक्ति पहुँच गाउँगाउँ सम्म आयो भन्ने कुरा छ । धेरै कुराहरु व्यवस्थापन गर्न अझै बाँकी छ । जस्तै अहिले वडाबाटै दिनु पर्ने सेवासुविधाको लागि नगर नै कुदिरहनु पर्ने अवस्था छ । कर्मचारीहरुको दरबन्दी त्यो अनुसारले भएको छैन । हाम्रै वार्डको हकमा पनि भर्खर प्राविधिकको रुपमा एक जना अमिन आउनु भएको छ । ओभरसियर, इन्जीनियर यही हुनुपर्ने, लेखा फाँट पनि यही हुनुपर्ने नगरबाट छुट्याइएको बजेट खर्च गर्ने अधिकार वडालाई नै हुनुपर्ने, त्यो चिज नहुँदा अहिले सम्म जुन सोचले यो व्यवस्था यहाँ चलिरहेको छ त्यो वेवस्था अनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सहिरहेका छैनौ । र अर्को कुरा बजेट अलिक बढेको खण्डमा पूपर्वाधार निर्माण विकास, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा अझै यो भन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्या छ ।
वडाको विकासका लागि केके गर्ने योजना छ ?
सुनसरी, मोरङ औद्योगिक करिडोरको एउटा महत्वपूर्ण खण्डमा अवस्थित छ हाम्रो वडा । यहाँ विकासको अर्थ नै बाटोघाटो, नाला, कुलकुलेसा हो भन्ने बुझाइ छ । त्यसकारणले गर्दा हामी अहिले पूर्वाधार निर्माणमै जोड दिइरहेका छौं । हाम्रो यो कृषिजन्य व्यवसाय गर्ने क्षेत्र परेन । यहाँ चाहीँ औद्योगिक मजदु्रहरुको बाक्लो बसोबास र उपस्थिति भएकोले अलिकति औद्योगिक मजदुरहरुको हकमा राम्रोसँग तालिम दिने योजना छ । सिप भयो भने त त्यो अनुसारको पारिश्रमिक पनि हुन्छ । एउटा ट्रेनिङ सेन्टर चलाए जस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा चाही ४ हजार ४५ सय मजदुर काम गर्छन् । त्यहाँ सुरुमा छिर्दा उनीहरुलाई एक दुई महिना ट्रायलमा राखिदिन्छ । तर त्यहाँ हुने काम पहिलै हामीले तालिमको माध्यमबाट दिलाउन सक्यौ भने काम गरेको पहिलो दिनबाटै पैसा पाउँछन् । त्यसकारणले गर्दा त्यो सेक्टरमा अलिकति काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा योजना छ ।
अन्य सामाजिक विपन्न वर्गको हकमा उनीहरुलाई तालिमहरु उपलब्ध गराएर आयआर्जन हुने हिसाबले सिलाईबुनाई लगायतका कामहरुलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने योजना पनि छ । पूर्वाधारको सेक्टरमा गर्नुपर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं, त्यो यहाँका जनताहरुले नि महसुस गरिरहनु भएको छ । ती बाहेकका यो सामाजिक र औद्योगिक क्षेत्रमा यो हिसाबले अगाडी बढ्दा खेरी अझ वडा अलिक प्रभावकारी ढङ्गले विकास गरेको महशुस हुने कुरामा हामी लागिरहेका छौं ।
अन्त्यमा वडाबासीहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
वडाबासीलाई भन्ने कुरा त धेरै थियो तर अहिले यो कोभिड १९ को सन्दर्भमा विगत ७र८ महिना देखि हामी राहत वितरण गर्ने देखि लिएर जनचेतना जगाउने, सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्छ, मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुरामा हाम्रो समय बितिरहेको छ । संकटकाल, संक्रमण र बिपत्तिविरुद्ध पहिला लड्नुपर्ने भएकोले वडाबासीहरुलाई कोभिड १९ लाई सामान्य रुपमा नलिऔं भन्छु । यसबाट जोगिन नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको प्रोटोकल पालना गर्दै सामाजिक दुरी कायम गर्ने, अनावश्यक काममा घरबाट बाहिर ननिस्कने, घरमै बस्ने सुरक्षित रहने, मास्कको प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने जस्ता कुरालाई पालना गरेर संक्रमणबाट देशलाई जोगाउनको लागि तपाईहरुको पनि भूमिका अनिवार्य छ भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु ।